Adiga oo Caafimaad qaba, Ilmo Caafimaad qaba - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Faa'iidooyinka + > Adiga oo Caafimaad qaba, Ilmo Caafimaad qaba
Uur leedahay? Nala soo hadal si aan u bilowno qorshahaaga dhalmada ka hor.
Ilaha loogu talagalay yaraanta caanaha caanaha dhallaanka
Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington waxay isu geysay jawaabaha su'aalaha inta badan la is weydiiyo iyo agabka, oo ay ku jiraan qoysaska ka qaybgalaya Barnaamijka WIC (Barnaamijka Nafaqada ee Haweenka, Dhallaanka, iyo Carruurta).
Ku soo dhowow qorshahaaga daryeelka uurka shakhsi ahaaneed
Uma baahnid oo keliya daryeelka uurka ka hor - waxaad u baahan tahay daryeel ku xeeran oo lagaa dhisay. Taasi waa sababta ay Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) u siiso barnaamijka Maaraynta kiisaska Caafimaadkaaga Caafimaadka Ilmaha Caafimaadka qaba.
Adiga oo u maraya Caafimaadkaaga, Ilmaha Caafimaadka qaba waxaad ku:
Hel taageero shaqsiyeed ka hor, inta lagu guda jiro, iyo ka dib uurkaaga
Baro dhacdooyinka uurka iyo waxa laga filayo
Kala hadal baahiyahaaga iyo dejiso yoolalka kahoreeya iyo umusha kadib oo ay la socdaan kooxda CHPW
Hel a Mashiinka Naasaha oo bilaash ah, iyo talo ku saabsan quudinta
Baro waxtarrada iyo adeegyada ilmahaaga, oo ay ku jiraan gudniinka iyo talaalada
Ku xidhnow ilaha deegaanka ee guryaha, bangiyada cuntada, raacida ballamaha caafimaadka, iyo inbadan
Dalbo kaarka EBT, WIC, naafonimo, iyo faa'iidooyin kale
Sideen iskuqoraa Caafimaadkaaga, Ilmaha Caafimaadka qaba?
Na soo wac ama buuxi foomka Ogeysiinta Uurka.
naga soo wac Foomka tooska ah
Marka xigta, waxaad heli doontaa a Qiimaynta Caafimaadka. Qiimeyntani waxay muujineysaa baahiyaha caafimaad ee shakhsiyadeed ee laga yaabo inaad qabtid inta aad uurka leedahay.
Kadib waxaan bilaabi doonaa qorshahaaga uurka oo ay ka mid tahay inaan kaala hadalno baahiyahaaga, yoolalkaaga, iyo barnaamijyada iyo adeegyada aad heli karto.
Miyaan u qalmaa maaraynta kiiska?
Jawaab gaaban: haa! Xubin ahaan CHPW, haddii aad ubaahantahay ama aad rabto maaraynta dacwada, waad heli kartaa. Kooxdayada OB, NICU, iyo maareeyayaasha kiisaska carruurta waxay bixiyaan taageero shaqsiyeed inta lagu jiro iyo kadib uurkaaga.
Waxaan si gaar ah kuugu dhiirigalinaynaa inaad codsato maaraynta kiiska haddii mid ka mid ah kuwan soo socda ay adiga ku khuseeyaan:
Waxaan lahaa a uurka khatarta sare leh ama dhalmada waagii hore.
Waxaan haystaa foosha hore, dhiig bax, iyo / ama wax badan oo ka mid ah matag.
Waxaan haystaa sonkorowga, hypertension, depression, COPD, ama xaalad kale oo daba dheeraatay.
Waan jeclaan lahaa caawimaad helitaanka raacitaanka ballamaha caafimaadka.
waxaan u baahanahay kaalmada guryaha, caawimaad raadinta bangiyada cuntada, ama adeegyo kale oo ku saleysan bulshada.
Waa maxay maamulaha dacwada?
Maareeyayaasha dacwadu way kula shaqeeyaan qeex oo la kulan himilooyinka caafimaadka ee aad isla go'aansataan. Qaar badan oo ka mid ah maareeyayaasha kiisaska CHPW waa shaqaale bulsheed oo ruqsad haysta, kalkaaliyeyaal caafimaad, ama khabiiro.
Qaabkeena wuxuu adeegsadaa tilmaamaha caafimaadka iyo caddeynta ku saleysan, taas oo macnaheedu yahay inay tijaabiyeen oo ay muujiyeen inay waxtar leeyihiin.
Maareynta kiiska sidoo kale waxay taageertaa xiriirka ka dhexeeya adiga iyo dhakhaatiirtaada. Waxaan hubinaynaa inaad dhammaantiin isku bog tihiin, waxaanan kaa caawin karnaa inaad hagaajiso daryeelkaaga si aad ugu adeegto baahiyahaaga.
Waxbadan ka baro barnaamijka maaraynta kiisaska ee CHPW
Sideen ku heli karaa Mashiinka Naaska ee bilaashka ah?
Marka taariikhda dhalmadaadu ay ku beegan tahay 90ka maalmood ee soo socda, waxaad dalban kartaa buug-gacmeed ama bamka naaska koronto la'aan. Waa kan sida:
gudahood ah 90 maalmood ka hor taariikhdaada, codso warqad dhakhtar Si aad u hesho bamka naaska bilaashka ah oo laga helo Bixiyaha Daryeelka Koowaad (PCP), dhakhtarka haweenka- haweenka (OB-GYN), ama umulisada.
Soo gudbi codsigaaga bamka naaska ee bilaashka ah iyo warqadda daawada mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaashan. Waxaad dooran kartaa astaanta aad rabto, sidoo kale waxaad dooran kartaa inta u dhaxaysa bamka gacanta ama korontada. Bambada Naasahaaga waxaa lagu soo diri doonaa cinwaanka gurigaaga kharash kuguma fadhiyo.
Byram Caafimaadka: booqo shabakadooda oo dhagsii badhanka "Bilow" Kadib raac 3 tilaabo oo fudud si aad u dalbato bamka naaska ee bilaashka ah.
Norco: buuxi foomka internetka oo guji cawl Gudbi badhanka si aad u dalbato Mashiinkaaga Naaska oo lacag la’aan ah.
Caafimaadka Guriga ee Sare: dhagsii sawirka Naaska Naasaha, soo dejiso oo buuxi foomka dalabka, oo emayl ugu dir [emailka waa la ilaaliyay] ama faks u dir 1-888-518-7568 si aad u dalbato bamka naaska ee bilaashka ah.
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad u baahan tahay caawimaad si aad u hesho dawadag Mashiinkaaga Naasaha, wac anaga 1-800-440-1561 (TTY Relay: Garaac 711).